Halle Berry kwuru banyere asịrị nke ime ime ya
Akụkọ kachasị atụle nke izu ụka gara aga bụ ihe ọmụma banyere afọ ime nke atọ nke Holly Berry dị afọ 50, bụ nke agbaara foto ọhụrụ nke onye omee ahụ àmà. Mgbe ọtụtụ ụbọchị kwụsị ịgbachi nkịtị, Holly kwụsịrị asịrị.
The search for pregnant stars continues ... Mgbe Eva Longoria na Rihanna, ọ bụ Halle Berry si atụgharị. Na Saturday ikpeazụ, onye omeeji ahụ gosipụtara na gallery foto nke 16 afọ ọrụ ebere ọrụ Chrysalis Butterfly Ball na Los Angeles.
Dị ka mgbe nile maka ntọhapụ nke onye omeeji ahọrọ otu uwe dị mma, n'oge a, ọ yi ejiji ọlaọcha kwesịrị ekwesị na akwụkwọ ndị na-eme njem site na Gosia Baczyńska dịka ọnụ ahịa 1575, nke na-ezochighị ya.
Holly Berry na Chrysalis Nru ububa Naa ihe omume
N'ịdị n'ihu igwefoto ahụ, Berry, dịka ọ na-emesi ọnọdụ dị mma ike, jiri nlezianya nabatara puziko ya, dịka ọ na-emekarị ndị nne n'ọdịnihu.
Ozugbo ndị otu nta akụkọ ahụ kwụsịrị isi ha, ha na-achọ inweta ihe ọmụma banyere afọ ime onye omeiwu ahụ, yana ịchọta aha nna ebubo a mụrụ, dịka ị maara, Berry batara ya na Olivier Martinez afọ gara aga ma ugbu a n'efu.
Halle Berry na Olivier Martinez
Insiders, nke ukwuu na ndakpọ olileanya nke ndị na-akpali akpali, kọrọ na Halle Berry abụghị n'ezie ime, mana ohere maka nwa nwanyị na-ewu ewu, na-ele foto, ka dị.
Naanị ihe karịrị ya
Kwụsị ịkọ nkọ n'isiokwu a kpebiri onye omempụ n'onwe ya na onye nnọchiteanya ya, bụ onye na-agọnahụ gọọmentị na Monday banyere ime nwa Hollywood kpakpando.
N'otu ụbọchị ahụ, Holly nyere ya foto na Instagram foto nke ji akọ na-akọwa nkọwa ndị dị na ya, dee:
"Nwa nwanyi agaghi enwe ike iri ogwu na anu?".
Halle Berry gọrọ na asịrị nke atọ nke ime n'afọ Instagram
Halle Berry gosipụtara ezigbo mmadụ n'oge njem na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Los Angeles
Halle Berry na-enwe obi ụtọ na ndị na-agbapụ ya na foto ya n'ime akwa
Ezinụlọ na nchịkọta: Halle Berry na njem na ụmụaka
N'ịbụ nke mejupụtara, Berry na-amụba ụmụ abụọ - nwa nwanyị Nala nke dị afọ 9 nke Gabriel Aubrey na nwa nwoke dị afọ 3 nke Maceo si Olivier Martinez.
Halle Berry na nwa Nala na nwa nwoke Maceo
Lindsay Lohan na-akwadebe ịghọ ihe ngosi na-egosi isi, na-ezu ike na Thailand
Mmiri Mel Gibson na onye hụrụ ya n'anya na Ememme Nkiri Cannes
Kim Kardashian weere onwe ya dị ka onyeisi na ezinụlọ
Lia Remini kwupụtara na ọ na-ewebata Jennifer Lopez
Ọhụụ Miranda Kerr na kpakpando ndị ọzọ na "Golden Globe" na-emeri emetụ
Ọtụtụ ndị ọbịa a ma ama bịara ngosi ahụ na Alexander Vang
Nwanyị Steven Spielberg natara aka na nkwekọrịta DT Model Management
Prince William gara leta ego na-enweghị ebe obibi ma nweta onyinye a na-atụghị anya ya
Mwakpo ọzọ na Paris: Mkpụrụ isi nke Bollywood kpakpando bụ Mulliku Sherawat
Hugh Hefner ga-amalite usoro gbasara ndụ ya
Nina Dobrev - ndụ onwe gị na 2015
Giselle Bundchen na Tom Brady: idyll ezinụlọ!
Ugu n'ime ite na oven
Ihe ntanetị na teepu Desktọpụ
Kwa afọ na ihe ndị na-enweghị ike ịkọwapụta mmiri na-emekarị: aji uwe na obere mkpirisi
Glass Eji Achịcha
Onye nduzi okike nke ika Diane von Furstenberg bụ Jonathan Saunders
Compote nke mkpụrụ vaịn maka oyi - Ezi ntụziaka
Ogologo ụbọchị ole ka ụmụ nwanyị na-azụ nwa?
Ihe osise nke arịa
Protein na mmamịrị nke nwa na-akpata
Onye na-enweghị ihe ịga nke ọma bụ Catherine Zeta-Jones dị afọ 48
Strudel na kabeeji
Kedu ka esi eme onwe gi onwe gi?
Dọkịta na akụrụ
Vitamin maka nkwonkwo na ligaments
Ballet akpụkpọ ụkwụ 2015 ụdị afọ
Ụlọ iri nri